FAQs | ANHUI TANGRUI CHIMWE ZVINOGONESESA TECHNOLOGY CO., LTD
1. Ndeipi nzvimbo yako huru yekushandisa? Dzakagadziridzwa mota kana dzevanhu?
Masisitimu ekufambisa uye Kumiswa kwemaviri akachinjwa mota uye dzevanhu
2. Chero kufunda kana kupihwa chitupa? Nemidziyo mikuru nemidziyo yekuyedza?
Certification: IATF16949 Midziyo yekuyedza: trilinear inoratidzira chimbo chekuyera, X-RAY, GENERTATORS, Metallographic detector, spectrograph uye nezvimwe zvinopfuura makumi maviri mhando dzakasiyana zvigadzirwa zvinogona kunge zviri R&D pamwedzi.
3. Ndeipi nzira yako yekubhadhara?
TT, In usd / euro, zuva rechikwereti rinogona kutsigirwa mushure memwedzi mitanhatu kubatana
4. Ndeipi yako yakajairwa kurongedza nzira?
Wooden ctn, opp bhegi remukati, kunze kwepallet., OEM & ODM inowoneka.
1. Ndeipi yako waranti mutemo?
Tangrui inopa indasitiri-inotungamira warandi pane zvese zvigadzirwa zvinosanganisira Lifetime Replacement Warranty pane dzakawanda sitering system uye Suspension-yakaburitswa zvikamu.
2. Ndeipi mutemo wako wekudzoka?
Mutemo wekudzoka kwaTangrui unogona kutariswa pano.
1. Sei uchitenga Tangrui Zvigadzirwa? Zvako zvikuru zvigadzirwa? Ndeapi misika mikuru nevatengi vaunoshandira?
Tangrui inyanzvi mukutungamira uye kumisa kweanopfuura makore makumi maviri, takashandira Toyota, Honda, Kia, Nissan, Ford, Buick, Chevrolet, Renault, Geely, Chery, BYD uye nezvimwe. Zvigadzirwa zvikuru zvaisanganisira madhiraivho, ruoko rwekudzora, yekuvhundutsa , bhora rakabatana, vhiri hub.
2. Ndeipi iyo Moq yezvigadzirwa zvako zvitsva?
Maseti mazana matatu, kana uchiisa chinhu, isina muganho.
3. Ungaita sei kuti utsvage chinhu chako chekuchengetera?
Tumira odha yako zvakananga.
1. Hodha yangu inotumirwa sei (naani)?
Mirairo yedu inotumirwa neyako akagadzwa kumberi, ako maodha anozotumirwa sekukumbira kwako.
2. Ndingaite sei kuteedzera odha yangu?
Iwe unogona kuteedzera odha yako neyedu account account, yekutevera ruzivo ichavandudzwa kazhinji.
3. Ndinoziva sei kuti odha yangu (s) yatumirwa?
Kana odha yako yatumirwa unogashira yekutumirwa yekusimbisa email, inotumirwa kune iyo emai yawakapinda iwe uchiisa odha yako.Ungatarisawo statu neayoococ manger.
4. Yangu inotora nguva yakareba sei kuti odha iuye kwandiri?
icluding mold yakavhurika nguva, mari yekuumba uye nezvimwe Nyowani mold yakavhurika nguva 40-60 mazuva, nguva yekugadzira yakawanda mazuva 35-45, nguva yekutumira 30-45 mazuva.
1. Ungave sei wako wega mumiriri?
Vakabatana zvakanyanya mwedzi mitanhatu, vagoveri vehunyanzvi kana avo vanogadzira zvikamu zvemotokari mumusika wako wemuno.
Mberi Kudhiraivha Gonhi, Wheel Hub, Shock Yekupinza Rubber, Hood Shock Inotora, Tire Bhora Rakabatana, Shock Inotora Bolt,